(အရှင်မဟာကဿပ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပိပ္ပလိနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့သည် မိဘသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့၏။ သို့သော် မောင်နှမကဲ့သို့သာ နေခဲ့၏။ တစ်ခါသော် လယ်ကွင်းထဲတွင် ပိုးမွှားတို့သေ‌ကြနေသည်ကို တွေ့ရသော် သံဝေဂ ဖြစ်ကြရသည်။ ထို့နောက် နှစ်ဦးသဘောတူ တောထွက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး ရဟန်းအသွင်ဝတ်ဆင်ကာ ပိပ္ပလသည် ရာဇဂြိုဟ်သို့ လည်းကောင်း၊ ဘဒ္ဒါကာပိလာနီသည် ပရိဗိုဇ်မ အာရမ်သို့လည်းကောင်း ထွက်ခဲ့လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် ပိပ္ပလိကို ကြိုဆိုရန် ရာဇဂြိုဟ်မှ သုံးဂါဝုတ်ဝေးသည့် ရာဇဂြိုဟ်နှင့် နာလန္ဒာအကြားရှိ ဗဟုပုတ္တက ညောင်ပင်၌ သီတင်းသုံးကာ နေတော်မူ၏။ ပိပ္ပလိအား ဘုရားရှင်မှန်းသိစေရန် ခြောက်သွယ်သော ရောင်ခြည်တော်တို့ကို လွှတ်၏။ ထိုအခါ ပိပ္ပလိလည်း ဘုရားရှင်ထံ တပည့်ခံကာ ရဟန်းဝတ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကဿပ ဟူသည့်အနွယ်အမည်ဖြင့် ရဟန်းပြုပေး၏။ ထိုအခါမှ စတင်ကာ သာသနာ့သမိုင်းတွင် အရှင်မဟာကဿပ ဟူ၍ ရဟန္တာတစ်ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဝါတော်တစ်ဝါအရတွင် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော် ရှင်မဟာကဿပနှင့် ဒုကုဋ်သင်္ကန်းချင်းလဲကာ ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ချီးမြှောက်တော် မူခဲ့သည်။ ထိုအခါ မဟာပထဝီမြကြီးသည် ပြင်းထန်စွာ တုန်လှုပ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဒုကုဋ်သင်္ကန်းသည် ပုဏ္ဏာဟု အမည်ရှိသည့် ကျွန်မ၏ အလောင်းမှ တစ်ပြည်လောက်ရှိသည့် လောက်တို့ကို ဖယ်ကာ ပံသကူ ကောက်ယူခဲ့သည့် သင်္ကန်းဖြစ်သည်။ ပံ့သကူကောက်ယူစဉ်ကလည်း မဟာမထဝီမြေကြီးသည် တုန်လှုပ်ခဲ့သည် ဖြစ်၏။ ရှင်မဟာကဿပသည် ဓူတင်အားလုံးဆောင်ကာ အားထုတ်ရာ ၈ ရက်မြောက်တွင် ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဦးရွှေအောင် - မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ)၊ ဝဋံသကာ နှင့် သိရောမဏိ (၁၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၂). ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊ စိတ္တဝဂ်၊ အပ္ပမာဒဝဂ်၊ ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချုပ်). အမှတ် ၃၈၊ ၁၀၉ လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်, ၃၄၁၊ ၃၄၆၊ ၃၄၇၊ ၃၄၈။
↑ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန (၂၀၀၅). ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တစ်ယောက်, ၆၁၈၊ ၆၁၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာကဿပ&oldid=501694" မှ ရယူရန်
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။